RGN-SIN Relief Flight for February
𝐘𝐚𝐧𝐠𝐨𝐧 - 𝐒𝐢𝐧𝐠𝐚𝐩𝐨𝐫𝐞 - 𝐘𝐚𝐧𝐠𝐨𝐧 𝐑𝐞𝐥𝐢𝐞𝐟 𝐅𝐥𝐢𝐠𝐡𝐭 𝐒𝐜𝐡𝐞𝐝𝐮𝐥𝐞 𝐟𝐨𝐫 𝐅𝐞𝐛𝐫𝐮𝐚𝐫𝐲 𝟐𝟎𝟐𝟏
မြန်မာအမျိုးသားလေကြောင်းမှ စင်ကာပူနိုင်ငံသို့သွားရောက်မည့် ခရီးသည်များ နှင့် နေရပ်သို့ပြန်မည့် ခရီးသည်များအတွက် အပတ်စဉ် သောကြာနေ့နှင့် စနေနေ့များတွင် ပျံသန်းပြေးဆွဲသော Yangon – Singapore – Yangon Relief Flight အတွက်လေယာဉ်လက်မှတ်များအား ယခင်ကဲ့သို့ Online Registration ပြုလုပ်ရန်မလိုအပ်တော့ပဲယခုတွင် MNA လက်မှတ်အရောင်းကောင်တာများ၊ MNA Website (www.flymna.com)၊ Application နှင့် နီးစပ်ရာTravel Agent များမှ မည်သူမဆို ဉီးရာလူစနစ်ဖြင့် အလွယ်တကူ ဝယ်ယူနိုင်ရန်အတွက် စီစဉ်ထားရှိပါတယ်ရှင်။
သို့ရာတွင် လက်မှတ်ဝယ်ယူထားသူများအနက်မှ Covid-19 ရောဂါရှိ/မရှိစစ်ဆေးသော Test Result တွင် Covid-19 ရောဂါ Positive ပြပါက လေယာဉ်လက်မှတ်အတွက် Refund ပြန်လည်ပေးအပ်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်းအသိပေးအပ်ပါတယ်ရှင်။
Yangon – Singapore 09:30 14:00
Singapore – Yangon 15:30 17:00
Normal Relief Flight
Business Class: $409
Economy Class: $261
Business Class: S$450
Economy Class: S$250
Business Class: $415
Economy Class: $265
Business Class: S$550
Economy Class: S$350
၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၅ ရက်နေ့
(UB 1001 / UB 1002)
လက်မှတ်အရောင်းပိတ်ချိန် - ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက်နေ့ (၁၆:၀၀)
Facility Quarantine သို့ Hotel Quarantine
၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၆ ရက်နေ့
(UB 1003 / UB 1004)
လက်မှတ်အရောင်းပိတ်ချိန် - ဖေဖော်ဝါရီလ ၂ ရက်နေ့ (၁၆:၀၀)
၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၂ ရက်နေ့
လက်မှတ်အရောင်းပိတ်ချိန် - ဖေဖော်ဝါရီလ ၈ ရက်နေ့ (၁၆:၀၀)
၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၃ ရက်နေ့
လက်မှတ်အရောင်းပိတ်ချိန် - ဖေဖော်ဝါရီလ ၉ ရက်နေ့ (၁၆:၀၀)
၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၉ ရက်နေ့
လက်မှတ်အရောင်းပိတ်ချိန် - ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၅ ရက်နေ့ (၁၆:၀၀)
၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၀ ရက်နေ့
လက်မှတ်အရောင်းပိတ်ချိန် - ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၆ ရက်နေ့ (၁၆:၀၀)
၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၆ ရက်နေ့
လက်မှတ်အရောင်းပိတ်ချိန် - ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၂ ရက်နေ့ (၁၆:၀၀)
၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၇ ရက်နေ့
လက်မှတ်အရောင်းပိတ်ချိန် - ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၃ ရက်နေ့ (၁၆:၀၀)
✈️ရန်ကုန် မှ စင်ကာပူ သို့လိုက်ပါမည့်ခရီးသည်များအနေဖြင့် စင်ကာပူနိုင်ငံသို့ ဝင်ရောက်ရန် အချက်အလက်စုံလင်စွာ ရှိရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ၇၂နာရီအတွင်း စစ်ဆေးထားသော Covid - 19 Negative Test Result ပါရှိမှာသာ စင်ကာပူနိုင်ငံသို့ဝင်ရောက်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
✈️စင်ကာပူ မှ ရန်ကုန်သို့လိုက်ပါမည့်ခရီးသည်များအနေဖြင့် အောက်ပါအချက်အလက်များစုံလင်စွာပါရှိရမည်ဖြစ်ပါသည်။
- စင်္ကာပူနိုင်ငံရှိ ပြည်ထောင်စု သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံ သံရုံးမှ ထုတ်ပေးထားသော Visa
- သက်တမ်း (၆)လနှင့် အထက်ရှိသော Passport
- ၇၂ နာရီအတွင်း စစ်ဆေးထားသောCovid-19 ရောဂါကင်းရှင်းကြောင်း ထောက်ခံစာ
- ကျန်းမာရေးထောက်ခံစာ (Health Declaration Form) - လေယာဉ်ပေါ်တွင်ဖြည့်ရန်
- သင်္ဘောသားဖြစ်ကြောင်း ထောက်ခံချက်
မြန်မာနိုင်ငံမှ အခြားနိုင်ငံသို့သွားရောက်မည့်ခရီးသည်များအနေဖြင့် သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံမှ လိုအပ်သောအထောက်အထားများ၊ COVID-19 Restriction သက်မှတ်ချက်များ ကိုအတိအကျလိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်အသိပေးအပ်ပါသည်။
All passengers flying with Yangon – Singapore – Yangon Relief Flight (Every Friday & Saturday) can purchase tickets through MNA Ticketing Counters, MNA website (www.flymna.com), Application and Authorized Travel Agents starting now, instead of online registration. The flight tickets are first come first serve basis.
In the case of the passenger showing positive test result on Covid-19 test, we will offer full refund back to the passenger.
▪38th Normal Relief Flight:5Feb 2021
Sales Closing Time - 1 Feb 2021 (16:00)
Normal Relief Flight Accommodation (By MOHS): Facility Quarantine or Hotel Quarantine
▪9th Special Relief Flight:6Feb 2021
Sales Closing Time -2Feb 2021 (16:00)
Special Relief Flight Accommodation (By MOHS): Hotel Quarantine only
▪39th Normal Relief Flight: 12 Feb 2021
Sales Closing Time - 8 Feb 2021 (16:00)
▪10th Special Relief Flight: 13 Feb 2021
Sales Closing Time -9Feb 2021 (16:00)
▪40th Normal Relief Flight: 19 Feb 2021
Sales Closing Time - 15 Feb 2021 (16:00)
▪11th Special Relief Flight: 20 Feb 2021
Sales Closing Time - 16 Feb 2021 (16:00)
▪41st Normal Relief Flight: 26 Feb 2021
Sales Closing Time - 22 Feb 2021 (16:00)
▪12th Special Relief Flight: 27 Feb 2021
Sales Closing Time - 23 Feb 2021 (16:00)
✈️Yangon - Singapore
Please note that the passengers are required to present necessary documents to enter Singapore. Passengers are required to present Covid-19 Negative Result, tested within 72 hours, upon entering Singapore.
✈️Singapore - Yangon
Person entering The Republic of the Union of Myanmar will need to fulfill the following requirements.
- Valid Visa issued by Myanmar Embassy in Singapore
- Minimum6months validity of passport
- Covid-19 Negative Result, tested within 72 hours
- Health Declaration Form (To be filled up on-board)
- Seaman Identification
Passengers are required to provide the required documents and abide the Covid-19 Restrictions by the respective country.
For detailed information, please contact the following:
☎MNA Call Center +951 378603 – 04 – 06 – 07 – 08 | +951 377840 – 41 – 42
☎Singapore Office +65 9791 2747 | +65 90688369 | +65 92707058 | singaporeops@flymna.com